21st Century Charter Sch of Gary (4164) | Indiana
Faka isikole, i-Corporate, noma igama lenethiwekhi
Buka Qhathanisa 0
21st Century Charter Sch of Gary (4164)
Ukulungela Ikolishi Nokunakekela Umsebenzi
Faka Qhathanisa Added! Susa kusuka ku-Qhathanisa
Isebenzisa idatha yezindleko enikezwe izinkampani zezikole zase-Indiana kanye nezikole ezishintsha umthetho, uMnyango Wezemfundo wase-Indiana uletha lokhu okubukwa ukuze kuthuthukiswe obala kwezezimali futhi usekele ukuqhathanisa okuvumelekile kwemali esetshenziswe ezakhiweni zesikole zase-Indiana. Le mininingwane igcwalisa izidingo zoMthetho Wobunye Bonke Abafundi Abaphumelelayo kanye nezinhlinzeko ze-Indiana Code 20-42.5-3-7. (Umthombo wedatha: FY 2019)
Yimalini esetshenzisiwe ngomfundi ngamunye ngonyaka wezimali ka-2019?
Ingqikithi yokuchithwa kwemali ngayinye kwabafundi kukhombisa konke ukusetshenziswa kwezimali zombuso, kwasendaweni, nakwezombusazwe kubikwe eHhovisi Lezimali Zezikole okwenziwa yizinkampani zezikole zaseIndiana kanye nezikole ezihlawulayo. Imali esetshenzisiwe ngoJulayi 1 kuya kuJuni 30 ihlukaniswe isibalo sabafundi ababhalise kulesi sikole ngo-Okthoba 1.
21st Century Charter Sch of Gary (4164) $10,036.21
Izikole ezinjengalesi $9,497.7
Izikole ezinjengalesi sikole ziyefana ngokulandela amanani abalulekile abantu.
Yikuphi izindleko ezisetshenzisiwe ze- [organ_type]?
Izindleko zonke zibandakanya izindleko zokufundisa nokusebenza. Lezi zindleko zibonisa konke ukusetshenziswa kwezimali zombuso, kwasekhaya, kanye nezezimali okubikwe kuMnyango Wezemfundo wase-Indiana.
Amaphesenti ezindleko ezisetshenziselwa izinhloso zokufundisa esikoleni.
Izindleko ezabiwe ngokufundisa
Amaphesenti ezindleko ezisetshenziselwa izinjongo zokufundisa ezabiwe ezikoleni zonke.
Ezinye izindleko zokufundisa
Iphesenti lezindleko ngezizathu zokufundisa ezifakiwe kwezinye izigaba zokufundisa.
Amaphesenti ezindleko zezinto zokuhamba, zokulungisa, ezezimali, nezamahhovisi aphakathi.
Izindleko ezabiwe ngokusebenza
Amaphesenti ezindleko ezisetshenziselwa izinhloso zokusebenza ezikoleni zonke.
Imiphi imithombo yezindleko ze- [organ_type]?
Izimali zombuso / zasekhaya
Bheka umthetho we-All Student Impumelelos Act (ESSA) onemininingwane yokusetshenziswa kwemali. https://www.doe.in.gov/finance/school-financial-reports
UMnyango Wezemfundo wase-Indiana
Thola Imibiko Yesikole neNhlangano Yezinkampani
Inikezwe amandla yi Hoonuit